ရတနာပုံ Teleport - DNS ပြောင်းခြင်း — MYSTERY ZILLION
ရတနာပုံ Teleport - DNS ပြောင်းခြင်း
December 2009 edited January 2010 in MZ News
-- IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR ALL INTERNET USERS --
For improved reliability and performance, all static IP assigned users are required to change their DNS Settings to:
NEW Primary DNS Server address: 203.81.162.22 (Old address was 203.81.71.69)
NEW Secondary DNS Server address: 203.81.162.23 (Old address was 203.81.71.73)
Please CLICK HERE for detailed instructions on how to make these required changes.
Yatanarpon Teleport Operations Team
To browse Internet, please click Accept
ကျနော်လဲ အဲဒီအတိုင်း change လိုက်တာပဲဗျာ။
အဲဒီ Page ကြီးကဆက်တက်နေတုန်းပဲ။
Accept နှိပ်မှပဲရတယ်။ Webpage ကို Auto မတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
Network ကို Disable, Enable လုပ်တယ်။
Windows ကို Restart ချတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆက်တက်တုန်းပဲ .... :106:
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပေးကြပါဦး ... :77::):77:
ကျနော် အဖြေတစ်ခုခု တွေ့ရင်လဲ ပြောပါမယ်။
တစ်ချို့သော DNS server တွေရဲ့ IP ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်.. ( IP star ) ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ အရင်အတိုင်းပါဘဲ.. 203.81.71.69/73 နဲ့တက်ပါသေးတယ်..
i can't believe actually at yet.
ကျေးဇူးပဲ ကို Alex ကြီးရေ
ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ ဘာမှပြောင်းစရာမလိုသေးဘူး၊ အရင်အတိုင်းပဲ ရနေသေးတယ်။
နောက်များမှာ သူပြောတဲ့ dns ကိုချိန်းပေးရပါမယ်
အဲ့ဒီ msg ကလဲ နောက်များမှာပျောက်မှာပါ
ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ ပြောင်းစရာမလိုဘဲ အရင်အတိုင်းဘဲ ရသေးပါတယ် ခင်ဗျာ....:):p
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို အကြောင်းကြားပေးတဲ့အတွက်ပါ။ ကျွန်တော် ဒီ address တွေကို MPT ADSL(Korea) မှာတွေ ့ဖူးတာတော့ကြာပီ။ အခုတော့ အားလုံးပြောင်းလိုက်တယ်ထင်တယ်။ အခုလိုမျီုး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူရှိတိုင်းပြောပြပေးပါဦးလို ့။။။ ကျွန်တော်တခုတော့ စဉ်းစားမိတယ်။ သူ ့တို ့ပေးထားတဲ့ ADSL Router ရဲ့configuration က dns address တွေကိုတော့ ဘယ်လိုချိန်းမလဲ မသိဘူးနော်။ static ဆိုတော့လေ။
အဟောင်းနဲ့ အသစ် ဘာပိုအဆင်ပြေမလဲ။ ဒီနေ့ (၁၀.၁၂.၂၀၀၉) ကတော့ ညပိုင်းမှာ တော်တော်လေးတယ်။ ဘာမှ သုံးလို့မရဘူး။ GMail, Gtalk အားလုံးလေးတယ်။ pfingo လည်း ဒီဘက်က အသံမကြားဘူး။ အစ်ကို/မ တို့ ဆီမှာရော ဘယ်လိုနေလဲ။ အခု DNS ပြောင်းတာက MPT နဲ့ Bagan Net ပေါင်းလိုက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် သီးသန့်ပဲလား။ Bagan Net တစ်ခုပဲ ပြောင်းတာလား မသိဘူး။
ပြောင်းတာက ရတနာပုံတင်မဟုတ်ဘူးတဲ့.. အမ်ပီတီလည်း ပါတယ်လို့ နက်ဂိုက်မှာတော့ ဖတ်ရတာပဲ.. အဆင့်မြှင့်ဖို့ စက်အသစ်များ ထပ်မံတပ်ဆင်လို့ပါတဲ့.. အနော်ကတော့. ဘန်းဖို့ စက်တွေ လိုလာလို့ အသစ်ထပ်တပ်တယ်ထင်တာပဲ..
လုပ်ပါဦး mpt က ဘယ် နံပါတ် တွေ ပြောင်းသွားလဲဆိုတာ.......
မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ နောက်တတ်ပညာရှင်လေးတွေ အသစ် တတ်လာသလိုပေါ့
ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ တတိုင်းကြီးမှာလည်း ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေတာ နေမှာပေါ့ ( ဟီးဟီး ကိုကို၀င်း က ခေါင်းဆောင်နော် )